Filtrer les éléments par date : jeudi, 18 juillet 2019
jeudi, 18 juillet 2019 13:02
Ampanefena- Vohémar: Sarona ireo dahalo mpanao sakan-dalana
Natolotra ny Fitsarana tao Antalaha ny 16 jolay teo ireo dahalo enin-dahy mpanao sakan-dalana taorian’ny nahatratraran'ny Zandary avy ao amin'ny Brigade Ampanefena azy ireo.
Ny marainan’ny 11 jolay tokony ho tamin'ny 8ora dia fiara tsy mataho-dalana iray sendra nandalo tao Ankijanibe, Kaominina Fanambana, Distrikan’i Vohémar no lasibatr’ireo dahalo ireo. Lasa tamin'izany ny vola 50 tapitrisa Ariary tao anaty fiara.
Raikitra avy hatrany ny tsongo dia nataon’ny Zandary avy ao Ampanefena, vao vantany nahazo fampandrenesana izy ireo. Ny tolakandron’io ihany dia efa voasambotra ny dimy lahy tena nanao ny fandrobana, ary niampy olona iray izay nampiantrano ka nanafina ireto olon-dratsy ireto.
Tazomina am-ponja vonjimaika ao Antalaha avokoa izy ireo amin’izao.
jeudi, 18 juillet 2019 12:51
Governemanta: Nametra-pialana ny praiminisitra Ntsay Christian
Nametraka ny taratasy fametraham-pialany sy ny governemanta tarihiny ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta Ntsay Christian androany. Voaray ary neken’ny filohan’ny Repoblika izany, araka ny fanambarana nataon’ny Sekretera jeneraly lefitra eo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika Dina Andriamaholy, teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha androany antoandro.
jeudi, 18 juillet 2019 12:43
Antenimieram-pirenena: Feno ireo mpikambana mandrafitra ny Birao Maharitra
- Voafidy ho filoha: Razanamahasoa Christine (IRD/Ambatofinandrahana);
- Voafidy ho filoha lefitra Faritany Toliara i Rabenirina Jean Jacques (IRD/Betioky Atsimo);
- Filoha lefitra Faritany Fianarantsoa: Razafitsiandraofa Jean Brunelle (IRD/Ikongo);
- Filoha lefitra Faritany Antananarivo: Rasolonjatovo Honoré dit Papasolo (IRD/Faratsiho);
- Filoha lefitra Faritany Toamasina: Michelle Bavy Angelica (IRD/Fenoarivo-Atsinanana);
- Filoha lefitra Faritany Mahajanga: Rahantinirina Lalao dit Ninà (IRD/ Mahajanga I);
- Filoha lefitra Faritany Antsiranana: Rahelihanta Jocelyne (IRD/ Antsiranana I).
jeudi, 18 juillet 2019 12:35
Lalaon’ny Nosy: 36 ny Atleta malagasy amin’ny taranja Atletisma
Miisa 36 ny Atleta malagasy izay handray anjara amin’ny taranja atletisma, mandritry ny Lalaon’ny Nosy hatao atsy amin’ny Nosy Maorisy.
Nitso-drano sy nanolotra 5 tapitrisa Ariary, ho vatsy entin’ireto Atleta malagasy izay hiaro ny voninahim-pirenena ireto androany, ny minisitry ny toekarena sy ny fitantanam-bola mpiahy ity taranja ity, Richard Randriamandrato.
Efa nisy 10 tapitrisa Ariary natolony tamin’ny volana aprily lasa teo nandritry ny famondronana voalohany ireo Atleta ireo.
jeudi, 18 juillet 2019 12:23
Lalaon’ny Nosy - Tenisy ambony latabatra: Omena tambiny manokana ireo mpilalao mandrombaka medaly volamena
Mpilalao 12, miampy mpanazatra sy mpitsara, no mandrafitra ny delegasiona malagasy amin’ny taranja tenisy ambony latabatra, hiatrika ny lalaon'ny Nosy hotanterahina atsy Maorisy ny 19 hatramin'ny 28 jolay ho avy izao. Ny filohan'ny federasiona Ambinintsoa Herley no hitarika azy ireo, hiainga anio tolakandro. Ny 20 hatramin'ny 28 jolay no hiantsehatra ireo mpilalao tenisy ambony latabatra.
Nanolotra 10 tapitrisa ariary ho vatsin-dalana sy fanohanana an’ireto mpanao fanatajahan-tena ireto, ny Minisitry ny harena an-kibon'ny tany sy ny loharanon-karena stratejika, Fidiniavo Ravokatra, izay mpiahy ity taranja ity, androany, teny amin'ny Mining Business Center (MBC) Mamory Ivato mialohan'ny hihazoan'izy ireo ny Nosy Maorisy.
Efa nanolotra 6 tapitrisa Ariary ny minisitra tamin'ny famondronana ireo mpilalao tany am-boalohany. Nampanantena sahady ity minisitra mpiahy ity fa omena tambiny manokana ireo mpilalao mandrombaka medaly volamena eo amin'ny taranja tenisy ambony latabatra.
jeudi, 18 juillet 2019 12:09
Antenimieran-doholona: Ankalazaina ny faha 60 taonany
Hankalazaina amin'ny alatsinainy ho avy izao ny faha 60 taonan'ny Antenimieran-doholona na ny SENAT, ka atomboka amin'ny fanompoam-pivavahana hiarahana amin'ny be sy ny maro ny maraina ary ny tolakandro kosa dia hisokatra mandritra ny telo andro ny valandresaka ho an'ny rehetra, izay atao eo amin'ny parking ny Sénat ihany, arahina fifanakalozan-kevitra izay tarihin'ny filohan'ny Antenimieram-doholona Rivo Rakotovao.
jeudi, 18 juillet 2019 12:07
Kitra-CAN 2019: Laharana fahatelo i Nizeria
Resin'i Nizeria tamin'ny isa 1 noho 0 i Tonizia nandritra ny lalao famaranana kely niadiana ny laharana fahatelo amin'ny fiadiana ny Amboaran'i Afrika amin'ny baolina kitra andiany faha-32.